Ahoana ny fomba hamadihana ny Android anao ho mic tsy misy tariby avo lenta | Androidsis
Manohy ny horonantsary azo ampiasainay totorales izay amin'ity fotoana ity izahay dia hanome fitaovana vaovao ho an'ilay Android taloha izay notehirizinao tao anaty vatasarihana nanangona vovoka. Ary izany dia amin'ny alàlan'ny fomba tena tsotra sy tsotra, andehanantsika avadiho ny Android anao ho mic tsy misy tariby avo lenta.
eny eny mila mic tsy misy tariby ianao ary mieritreritra ny hividy iray ianao, manoro hevitra anao aho mba hiandry fotoana fohy ary handany folo minitra hamakiana ity lahatsoratra ity ary hijerena ity horonantsary ity izay lohan'izany, satria mety tsy mila mandany Euro tokana ianao vao afaka mankafy. ny mic tsy misy tariby tsara afaka mifandray amin'ny solosainao Windows na MAC Amin'ny alàlan'ny fifandraisana tsy misy tariby na amin'ny alàlan'ny Bluetooth na Wifi. Raha te hahita ny kalitao an'ity mikrô tsy misy tariby ity izahay izay nanova ny firaketana ny terminal Android anay, amin'ilay horonan-tsary mifatotra avelako eo ambonin'ireto andalana ireto, manomboka amin'ny minitra 3: 12, ny firaketana an-tsary avy amin'ny Windows dia mampiasa ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus ho toy ny fidirana am-peo, izany hoe, toy ny mikrô tsy misy tariby.
1 Ahoana ny fomba hamadihana ny Android ho lasa mike tsy misy tariby
1.1 Sintomy ny Wo Mic ao amin'ny Google Play Store
1.2 Sintomy ny client ho an'ny windows
1.3 Sintomy ireo mpamily Wo Mic ho an'ny Windows
1.4 Sintomy ny client ho an'ny MAC
1.5 Ahoana ny fametrahana klioba Wo Mic amin'ny Windows sy MAC
1.6 Ahoana ny fomba hanombohana mampiasa ny mic tsy misy tariby
Ahoana ny fomba hamadihana ny Android ho lasa mike tsy misy tariby
Para avadiho ho lasa mikefa tsy misy tariby ny Android-nao Tsy mila manaraka ireo dingana nolazainy taminao tao amin'ilay lesona an-tsary mifampitohy ihany koa izahay, ary koa mampidina rindranasa roa maimaimpoana tanteraka. Ny voalohany ho an'ny Android ary misy ao amin'ny Play Store an'ny Google misy ny anarana Wo Mic, ary ny faharoa mpanjifa amin'ny birao manan-kery ho an'ny Windows sy MAC, izay etsy ambany no ampifandraisiko ireo rohy mivantana ho an'ny fampidinana azy roa:
Sintomy ny Wo Mic ao amin'ny Google Play Store
Sintomy ny client ho an'ny windows
Tsindrio eto raha hisintona ny client Windows Wo Mic
Sintomy ireo mpamily Wo Mic ho an'ny Windows
Ankoatra ny Wo mic client, Ny mpampiasa Windows dia tsy maintsy misintona ary apetaho ireo kapila ilaina amin'izay samy afaka mifampiresaka tsara ny rindranasa, ny rindranasa Android ary ny mpanjifa apetraka ao amin'ny Windows. Misy maimaim-poana ireo kapila ireo amin'ny fipihana fotsiny ity rohy ity.
Sintomy ny client ho an'ny MAC
Ho an'ny Mac, ny ampidino ary apetraho ity rakitra tokana ity.
Ahoana ny fametrahana klioba Wo Mic amin'ny Windows sy MAC
Ho an'ny Mac dia mora toy ny fanindriana indroa amin'ny rakitra alaina amin'ny endrika PKG ary araho ny torolàlana eo amin'ny efijery. HO AN'NY Windows dia tsy maintsy mametraka ny mpanjifa Wo Mic aloha ary avy eo mametraka ireo kapila alaina. Raha vantany vao vita ireo dingana tsotra roa ireo, mba handehanan'ny zava-drehetra araka ny tokony ho izy dia tsy maintsy averintsika indray ny PC.
Ahoana ny fomba hanombohana mampiasa ny mic tsy misy tariby
Mba hanombohana ny fampiasana ny Android ho micro tsy misy tariby, dia tsotra toy ny tamin'ny voalohany dia tantano ny fampiharana Android ary safidio Settings avy eo an-tampon'ny efijery. Vantany vao tonga any isika dia misafidy ny safidy voalohany, ilay milaza Transport ary mifidy isika Wifi.
Ankehitriny dia mandeha amin'ny safidy isika Start y tondroinay ny adiresy ip omen'ny fampiharana anay, adiresy IP izay hitovizany: 192.168.1.212.
Avelantsika any aoriana ny fampiharana ary mihazakazaka amin'ny rindrambaiko Windows na MAC izahay. Ny sisa ataonao dia tsindrio ilay safidy Connect, safidio ny fomba fifandraisana, amin'ity tranga ity Wifi, ary farany soraty ny adiresy IP nomen'ny fampiharana Android anay teo aloha, amiko 192.168.1.212.
Amin'izany isika dia efa afaka ampiasao toy ny micro tsy misy tariby ny Android talohaNa dia manana karazana olana aza ianao amin'ny fifandraisana, dia tsy maintsy tsindrio ny kisary mpandahateny an'ny Windows, ny kisary eo amin'ny bara fiasa, ny kisary volume, ary amin'ny bokotra ankavanan'ny totozy dia safidio ny safidinao fitaovana handikana safidio ny Wo Mic ho toy ny fitaovana fampidinana feo default.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fomba hamadihana ny Android ho mic tsy misy tariby avo lenta
Salama, manome fanontaniana kely mifandraika amin'ilay lahatsoratra aho,
Misy safidy ve hanovana ny finday ho micro tsy misy tariby, nefa ampiasaina amin'ny smartv android?
Mila manao Skype aho. Manana webcam izay mikrô ihany koa aho amin'ny fotokevitra, fa ny ampahany amin'ny sary ihany no mandeha, na tsy haiko ny mampandeha ilay mic.
Andao hojerentsika raha misy afaka manampy ahy,
Misaotra an'i Francisco noho ny fampahalalana amin'ny mic.
Juan David Acevedo Taborda dia hoy izy:
Afaka mifandray ve ny telefaona maro miaraka? Misy safidy hafa ve hampifandraisana telefaona maromaro?
Valiny tamin'i Juan David Acevedo Taborda
Raphael G. dia hoy izy:
Famoahana tsara fa ny filako dia hitovy, fa avadiho ho rafitry ny adiresy ampahibemaso, izany hoe izay resahina amin'ny finday dia averina alefa amin'ireo mpandahateny amin'ny pc, raha azo atao ny zavatra lany andro hisorohana ny fifampikasohana, azo atao ve izany? Misy programa mamela azy io ve? Hampiasaina ho toy ny rafitry ny adiresy ampahibemaso ao an-dakilasy.
Valiny tamin'i Rafael G.
Inona no dikan'ny hoe "ianao"?